Soomaaliya: Daadad sababay barakac xooggan, cagtana mariyay tuulooyin - Latest News Updates
Soomaaliya: Daadad sababay barakac xooggan, cagtana mariyay tuulooyin
In kabadan 105,000 oo qof ayay saameeyeen daad ku dhuftay tan iyo bishii Juun gobollada Koonfur Galbeed, Jubaland, Hirshabeelle iyo Banaadir ee dalka Soomaaliya, sida ay sheegtay ay Qaramada Midoobay.
Illaa 40 tuulo oo ka tirsan degmooyinka Balcad iyo Afgooye ayay daadadkaasi cagta mariyeen iyagoo baabi’iyay dhul beereed lagu qiyaasay 33,000 oo hiktar oo dalagyo kala duwan ay ka baxayeen sida ay sheegayaan hay’adaha qaramada midoobay.
Roobab mahigaana oo ka da’ayay qaybo kamid ah Soomaaliya ayaa keenay in webiyadu karkaarada jabsadaan isla markaana soo rogmadaan daadad jiiray tuulooyiin iyo magaalooyin ka tirsan Koonfurta Soomaaliya. Muqdisho afar qof oo ah dadka gudaha ku barakacay ayaa dhintay, boqollaal kalena way ku guryo beeleen sida laga soo xigtay xafiiska isku duwida gargaarka bini’aadanimo ee qaramada midoobay.
Roobab mahiigaana oo ka da’ayay labadii todobaad ee bishan ugu horeysay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa daadadkii ka soo rogmaday waxay barakiciyeen dad kabadan 3,000 oo qof. Webiga ayaa ka fatahay xaafado ay kamid yihiin Baalguri, Damaaley, Raqeyle iyo Aytire.
Degmada Wanlaweyn ee isla gobolka Shabeellaha Hoose iyo hareeraheeda Iyana daadadku waxay barakiciyeen dad lagu qiyaasay 24,000 oo qof.